Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU oo Shir Lagu Xusayo MXO Ku Qabtay Dalka Norway
Ururka OYSU oo Shir Lagu Xusayo MXO Ku Qabtay Dalka Norway
Waxaa maanto Sabti 28.02.2015 lagu qabtay Magaalada Oslo ee caasimadda Norway shir lagu xusayey Maalinta Xasuuqa Ogadeniya. Xuskan baroordiiqda ah oo lagu xuso sanad kasta bish Febraayo dhibaatooyinka gumeesigu kula kacay isla markaana uu weli la daba taagan yahay bushada somalida ogadeniya ee dulman. Dhibaatooyinkaas oo isugu jidho dil, jirdil, kufsi, barakin, dhac iyo gubid maagaaloooyin iyo tuulooyin dhan oo la gubo. Xuskan oo ay soo qaban qaabiyeen Ururka Midoowga Dhalinyarada iyo Ardayda ogaden (OYSU) ayaa wuxuu furmay 5tii saacada Oslo, waxaana ugu horeentii lagu furay aayaddaha quraanka iyo wacdi kooban oo ka hadlayey dhibaatadda lagu hayo shacabka ogaadenya iyo waxa looga baahan yahay ineey bulshada ka qabato, oo uu soo jeediyay Sh. Cabdiweli. Intaa ka dib waxaa loo istaagay astaantii calanka ogadeniya.
Intaa ka dib waxaa goobta ka hadlay. Gudoomiyaha Jaaliyadda Mudane Khaliif. Xoghayaha Oysu Mudane Cabdiqadir iyo Gudoomiyaha Haweenka Marwo Barliin.Dhamaantood waxay ka sheekeeyeen muhimada kulankan iyo xasuusta ay leedahay bishan Febraayo.
Waxaa sidoo kale warbixin ku saabsan waqitiyada iyo meelihii ee ka dhaceen tacadiyadda soo jeediyay Mudane Haaruun oo ah Madaxa xiriirka caalimiga ah ee ururka OYSU Norway. Warbixintaas oo ku tusineeso in dhibaato kasta oo shacabka ku dhacdaa ay jidhaan dad ay u diiwan gashan tahay , cidii geesatana maalin un lagula xisaabtani doono.
G.xigeenka HDH JWXO oo isna shirka lagu martiqaaday ayaa ka warbixiyay Soo yaalka Halganka iyo sida looga bixi karo dhibaata shacabka heesata.
Waxaa la daawaday filim aad u naxdin badan oo ka hadlaya dhibaatooyinka iyo tacadiyada loo gaysanayo shacabka aan waxba galabsan ee birma gaydada ah. Filimkan xasuuqa ogadeniya oo socday mudo dha 20 daqiiqo ah oo run ahaantii badalay, gigilyna quluubtii dadka daawanayey oo dhan sida foosha xun ee gumaysiga ethiopa ee manaxaha ah uu shacabka birma gaydada ah u galayso.
waxa qudbad qiimo badan abaabuka iyo wacyi galin ka jeediyey mudane c.shakuur Madaxa abaabuka iyo arimaha bulshada jaaliyadda ogadeniya ee Norway.
Isra C.shakuur X. C. Budul waxay xuskii xasuuuqii ogadeniaya ka jeedisay qudbad aad qiimo badan oo ku baxaysa afka norwegianka kana hadlayshay dumarkaa iyo ciyaalka ogaden xaalada qalafsan ee ogadeniya ka jirta waana gabadh da,yar oo mudan in lagu daydo.
Maadaama ay kulanja baroodiiqda ah ay soo qaban qaabiyeen ururka OYSU waxaa lagu soo gaba gabeeyay barnaamij ka sheekeenaya OYSU taariikhdooda waxa qabadkooda sababbihii loo aas aasay. Waaxaana soo jeediyay madaxa warfaafinta ururka OYSU Noray Mudane Maxamed Amiin.